Puntland oo ka warbixisay Maydad horleh oo laga helay Xeebta Boosaaso - Caasimada Online
Home Warar Puntland oo ka warbixisay Maydad horleh oo laga helay Xeebta Boosaaso
Puntland oo ka warbixisay Maydad horleh oo laga helay Xeebta Boosaaso
Maamulka Puntland ayaa maanta sheegay inay gacanta ku soo dhigeen doomo lagu tahriibiyo dadka Shacabka ee Yaman doonaya.
Wasiirka Kaluumaysiga Maamulka Puntland Maxamad Faarax Aadan oo warbaahinta lahadlay maanta ayaa sheegay inay bada ku soo caaariyeen dad kale oo horleh oo gaaraya afar ruux oo qayb ka ah 18 kii ruux ee shalay ku soo caariyay xeebaha gobolka Bari gaar ahaan deegaanka Caluula.
Maalintii shalaya ayay ahayd Markii doon ay dad shacab ay la socdeen oo tiradooda ay gaarayso 60 ruux ay bada kula qanibtay doonidii ay la socdeen taas oo aan ka fogayn Xeebta magaalada Boosaaso.
Wuxuu sheegay in maanta la aasay dadkii Shalay ay bada soo caarisay Islamarkaana ay gacanta ku dhigeen 18 doon oo kuwa Tahriibka ah.
Wasiirka Kaluumaysiga iyo qayraadka Bada Puntland ayaa carabaabay inay wadayaan howlgalka ay ku soo qabanayaan kooxaha wax tahriibiya iyadoo shalay dadka dhintay ay ku jireen rag,Dumar iyo Caruur 4 sano jir ah.